Tranokala mpamorona 50 | Famoronana an-tserasera
Ny iray amin'ireo Maxim rehefa miasa amin'ny famolavolana tranonkala dia raha tsy miova ny tranokalanao dia tsy afaka hino ny mpanjifa fa mahavita azy ianao, satria ny fitaratra hijerenao ny tenanao isan'andro dia ilay milaza hoe aiza ianao dia.
Afaka mianatra zavatra betsaka avy amin'ireo maso ivoho mpamorona endrika tsara indrindra sy mpamorona endrika tsara indrindra isika, ary afaka mijery ireo pejin-tranonkalany ihany koa ary mahazo aingam-panahy hahalala izay lalana hisafidianana, ny làlan-kaleha arahinao ary ny fomba fitadiavana
Aorian'ny fitsambikinana compilation lehibe.
1 Volavola mamirapiratra sy collage
2 Volavola mifototra amin'ny sary
Volavola mamirapiratra sy collage
Mamorona izy ireo
Famoronana tsotra fotsiny
Tiako ny loko
Mamihina ho an'ny biby goavam-be
Volavola mifototra amin'ny sary
Will Port portfolio
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Tranokala mpamorona 50
DanieloDesign dia hoy izy:
Mamaly an'i DanieloDesign
ferrisdesign dia hoy izy:
Fitaovana lehibe manolotra karazana tranonkala isan-karazany, ny ankamaroan'izy ireo dia tena mahaliana sy manome aingam-panahy!
Valiny tamin'i Ferrisdesign
jema dia hoy izy:
Tiako ilay naoty ,,,
endrika tsara dia tsara jerena hanitatra ny fahitana sy hahita kolontsaina samihafa amin'ny famolavolana
Mamaly an'i jema
Cesar Sandoval dia hoy izy:
Fanangonana tena tsara.
Valiny tamin'i César Sandoval
Abel e alvarez dia hoy izy:
Salama misy bandy vitsivitsy toa manana fahaiza-mamorona amin'ny famolavolana
Valiny tamin'i Abel E Alvarez
Mampihoron-koditra ny ankizilahy
Yara A. vite Hdez. dia hoy izy:
Ny pejinao amin'ny tranokala famolavolana dia manana fampahalalana tena tsara, satria miovaova isan-karazany izy io, na izany aza mampiseho ny tsy fisian'ny loko mamirapiratra, raha ny fahitako azy ny idealy dia ny hahatonga azy io ho mahasarika kokoa ny mpampiasa.
Tsara be ireo lahatsoratra. Amin'ny ankapobeny dia tiako ny typography, tsara be ireo lohateny nasiana loko.
Tiako ny asany, manavao izy.
Valiny tamin'i Yara A. Vite Hdez.
yhosz vhayez dia hoy izy:
loharano tsara ho an'ny aingam-panahy
Valio i yhosz vhayez